Kuvhota Zvinetso zveVashandisi veWiricheya | KarmanHealthcare.com
Kupfuura 33 mamirioni remara MaAmerican anokodzera kuvhota asi havakwanise nekuti nzvimbo zhinji dzekuvhotera hadzisi kufambidzana uye hauna nzvimbo dzakakodzera dzokupaka. Izvi zvinofanirwa kuchinja kuti iyo remara nharaunda inogona kuvhota munzvimbo yakasununguka uye inogamuchira.
Avo vakaremara zvakare vane izwi rinoda kunzwika, kungofanana nechero mugari ane simba. Zuva reSarudzo, 8 Mbudzi 2016 rava kutosvika uye sarudzo dzekutanga dzave kutoitwa. Kune akawanda remara vavhoti, asi vazhinji vavo havavhoti nekuda kwenzvimbo dzisingawanikwe dzekuvhota. remara vamiriri venharaunda vanonetseka kuti nzvimbo dzekuvhotera hadzisi kufambidzana kunharaunda yavo paZuva reSarudzo.
Zvinetso zvinotambudza nzvimbo dzekuvhotera zvinosanganisira kupaka zvisirizvo, madhoo madiki, kwete ramp kana maelevhuru. Iyo US Congress yakapa iyo Rubatsiro America Vote Mutemo, iyo yakaiswa munzvimbo yekugadzirisa kuwanika pazviteshi zvekuvhota. Sekureva kweiyo Rubatsiro America Vote Mutemo, nyika dzinogona kuwana mari yemubatanidzwa yekugadzira nzvimbo dzekuvhotera zvakanyanya kufambidzana kumunhu wese.
Vagadziri vekutakurika kufambidzana ramp vari kuwana bhizinesi rakawanda kubva kunzvimbo dzekuvhota munyika dzese. Kunyangwe ichi chiri chenguva diki gadziriso, inogadzirisa zvinonyanya kudikanwa kune avo vakaremara. Mhinduro dzechigarire dzinofanirwa kuve munzvimbo nekukurumidza sezvazvinogona.
Chekuongorora Kuti Ugadzire Nzvimbo dzekuvhota Zvakawanda kufambidzana
Parking- Tsvaga remara nzvimbo dzekupaka dziri padyo nemusuwo sezvinobvira. Ivo vanofanirwa kuve vakuru zvakakwana kubvumidza nyore kupinda mukati nekubuda kunze kwemotokari. Hapana zvipingaidzo kana marara anovhara nzira yekupinda. Iko kunodawo kuve kufambidzana kupinda kubva panzvimbo yekupaka kuenda pamukova wechivako uye panoda nzvimbo yakakwana yekuti wiricheya ifambe kana remara munhu anodonhedzwa.
Masuo- Panofanirwa kuve nemusuwo mumwechete wechivako unoonekwa kune vakaremara. Kana mukova iwo usiri kumberi kwechivako, zvikwangwani zvinofanirwa kumiswa kuratidza maitiro ekuwana chivakwa. Masuo anofanira kunge akafara zvakakwana vanofamba, magetsi emagetsi, mawiricheya, iwo kushandisa madondoro netsvimbo.
Elevators- Kana iyo nzvimbo yekuvhota isiri pasi pevhu, maelevheti anofanirwa kuwanikwa, mukushanda kwakanaka uye ave nenzira yakajeka kwairi. Ruzhinji rwemaelevheta ari munzvimbo yekutandarira yechivako, asi pane dzimwe nguva pavanogona kunge vakatenderedzwa pakona kana kune imwe nzvimbo.
Nzira- Paseji yega yega panzvimbo yekuvhotera nzvimbo inofanira kunge iri kufambidzana. Dzinofanirwa kuve dzakafara zvakakwana kuti dzikwanise kutakura wiricheya hombe uye scooters uye dzinofanirwa kuve neiyo imwe nzvimbo yekufambisa.